မိန်းမဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခ (၂) – အပိုင်း (ခ) | Atta Kyaw & Lettwebaw Books
Atta Kyaw & Lettwebaw Books	For those who love reading
မိန်းမဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခ (၂) – အပိုင်း (ခ)
အမျိုးသမီးများအတွက် နောက်ပိုင်းဇာတ်က ပဓာန မဟုတ်ပါ။ အလွယ်ဆုံး ပြောရလျှင် မိန်းမသားများအတွက် ချစ်တင်းနှောခြင်းကို လိုချင် တောင့်တကြသည် မှန်သော်လည်း ယင်းမှာ ယောက်ျားသားများ ကဲ့သို့ အဲဒါမှ မရလျှင် သေရမလောက် ကိစ္စမျိုးကြီး ဖြစ်မနေပါ။
အမျိုးသမီးတွေအတွက် အလိုအပ်ဆုံးမှာ ကြင်နာယုယမှုနှင့် နွေးထွေးမှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ အလွယ်ဆုံး ပြောရလျှင် ချစ်တင်းနှောခြင်းကို ယောက်ျားသားတွေက ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့် ခံစားကြသည် မှန်သော်လည်း အမျိုးသမီးများကမူ “နှလုံးသားဖြင့်” ခံစားလိုကြပါသည်။ အဲဒါကို ကို ရွှေယောက်ျားတိုင်း နားလည်ထားသင့်ပါသည်။
စသဖြင့် ပါဝင်သော မိန်းမဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခ (၂) – အပိုင်း (ခ) ကို ဆက်လက် တင်ဆက်ထားပါတယ်။ စိတ်ပါဝင်စားသူများ http://nookycontent.wordpress.com မှာ သွားရောက် ဖတ်ရှုတော်မူကြပါကုန်။
from → About Men, Information, Love & Marriage
← The Trouble of BeingaWoman 2: Part One
The Trouble of BeingaWoman2– Part III →
Win Oo (3)
Film Script Study (1)
FM Broadcasts (23)
Sound File (13)
ဝေေ၀ဆာဆာ ဖတ်စရာ	About
အဖတ်များတာPhone Story (Part 2)
မကြာခင်က တင်ထားတာ	ဘယ်ဘ၀မှာ နေချင်ကြပါသလဲ
မကြာခင်က ပြောကြ ဆိုကြတာလေးတွေ	Aung Maun on A Language isaVehicle	phyo maung maung on Yours Faithfully	Aung Maun on How to Love Somebody Thoughtfully	Luhan on On Homosexuality	Aung Maun on စမလုံးချင်ဘု လုံးလုံးကြီး စိတ်နာ (၃)	lettwebaw on On Discrimination 2: Sound File	lettwebaw on On Discrimination 2: Sound File	Htar on On Discrimination 2: Sound File	Aung Maun on ဂျီကျတတ်တဲ့ ချစ်သူရဲ့ အမော	လအလိုက် မော်ကွန်း	Select Month
အားပေးကြတဲ့ အကြိမ်ရေ	265,360 Top Clicksnookycontent.wordpress.co…မူပိုင်ခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍…	သည်ဘလော့(ဂ်)ပေါ်က စာတွေကို လူပုဂ္ဂိုလ် “တစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့” မိမိတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများထံ လက်ဆင့်ကမ်း ဖြန့်ဝေတာမျိုး၊ ကူးယူ ဖော်ပြတာမျိုး၊ Facebook, Twitter စတဲ့ ကွန်ရက်တွေကတစ်ဆင့် မျှဝေတာမျိုးကို မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။ အဲလို ဖြန့်ဝေတဲ့အခါ ရေးသူအမည်၊ မူရင်းကို ဖော်ပြခဲ့တဲ့ စာအုပ်၊ စာနယ်ဇင်းအမည်၊ သည်ဘလော့(ဂ်)ရဲ့ လင့်(ခ်)တို့ကို ဖော်ပြပေးသင့်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ရေးသူ အမည်ကို မလွဲမသွေ ဖော်ပြပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေလား။
စီးပွားရေးဆန်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ၊ အသင်းအဖွဲ့ / အုပ်စု အမည်ခံထားတဲ့ Facebook, Twitter စတာများပေါ်က ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ အသင်းအဖွဲ့ / အုပ်စု အမည်ခံထားတဲ့ Web Page တွေ၊ Blog တွေမှာ ပြန်လည် အသုံးပြုမယ် ဆိုရင်တော့ မိမိတို့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် စောင့်သိရိုသေတဲ့ အနေနဲ့ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံကြပြီး “လက်တွဲဖော်” စာအုပ်တိုက်၊ ဒါမှမဟုတ် အတ္တကျော်ရဲ့ စာနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့သာ ဖော်ပြကြတာက အကောင်းဆုံးပါလို့ မေတ္တာတရား၊ ဂါရ၀တရား ရှေ့ထားပြီး အသိပေး နှိုးဆော် အကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်။
သည်ဘလော့(ဂ်)မှာ ၀င်ရေးသွားကြတဲ့ comment မှတ်ချက်များ အားလုံးကို ရေးလိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် “လက်တွဲဖော် စာအုပ်တိုက်ရဲ့မူပိုင်” ဖြစ်သွားတယ်လို့ မှတ်ယူပါမယ်။ ဆိုလိုတာက သည်ဘလော့(ဂ်)မှာ ရေးသွားတဲ့ ကွန်မန့်တွေကို ကွန်မန့်ရှင်ရဲ့ အမည်ရင်းအတိုင်းဖြစ်စေ၊ အမည်ရင်းကို လွှဲပြောင်းပြီး ဖြစ်စေ လက်တွဲဖော်စာအုပ်တိုက်က ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်များမှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြုဖို့ ကွန်မန့်ရေးသူက သဘောတူညီပြီး ဖြစ်တယ်လို့ လက်တွဲဖော်စာအုပ်က မှတ်ယူပါမယ်။ သည်အတွက် ဘယ် ကွန်မန့်ရှင်ကမှ လက်တွဲဖော် စာအုပ်တိုက်ဆီက စာမူခအပါအ၀င် မည်သည့် အကျိုးခံစားခွင့်မှ တောင်းခံခြင်း မပြုနိုင်ကြောင်း အတိအလင်း မြွက်ဟ ကြေညာထားလိုက်ပါရစေ။ Meta	Register	Log in
WordPress.com	သိပ်မကြာသေးခင်က ထွက်ထားတဲ့ စာအုပ်
လက်တွဲဖော်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ	Facebook စာမျက်နှာက သည်မှာပါ
ကျွန်တော့်အကြောင်း အတိုချုပ်Atta KyawFreelancerI am only one, But still I am one. I cannot do everything, But still I can do something; And because I cannot do everything I will not refuse to do the something that I can do.	Createafree website or blog at WordPress.com.
Follow “Atta Kyaw & Lettwebaw Books”